Madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Mike Pence ayaa Turkiga uga digay gantaallada uu Ruushka ka iibsanayo | Dhamays Media Group
Madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Mike Pence ayaa Turkiga uga digay gantaallada uu Ruushka ka iibsanayo
Madaxweyne ku xigeenka dalka Maraykanka Mike Pence ayaa Turkiga uga digay gantaallada uu Ruushka ka iibsanayo ee S-400 ee lidka diyaaradaha, kaas oo Washington ay u aragto in uu halis ku yahay diyaarradaha Maraykanka.
Wuxuu sheegay “in ay waajib tahay in Turkigu” uu kala doorto in uu sii ahaado xubin muhiim ah oo gaashaan buurta Nato ka tirsan ama uu halis galiyo ammaanka saaxiibtinimadaas “isaga oo qaadaya tallaabo taxadar la’aan ah”.
Turkiga ayaase ku jawaabay in heshiiska ay ku gadanayaan gantaaladaas uu yahay heshiis horay horay loo gaaray.
Ankara ayaa calaaqaad dhaw la samaysanaysay Ruushka ka dib markii uu dhawaan xumaaday calaaqaadkii uu la lahaa Maraykanka iyo Yurub.
Turkiga ayaa ciidammada labaad ee ugu badan ku leh ururka Nato oo ah gaashaan buur ay ku midaysan yihiin 29 dal, kaas oo loo aasaasay in la isaga difaaco Midawgii Soofiyeet.
Maraykanka ayaa rumaysan in iibsashada Turkiga ee gantaallada S-400 ay halis galinayso diyaaradaha dagaalka Maraykanka ee F-35.
Washington ayaa hadaba baajiyay qorshihii ay Turkiga kaga gadaysay diyaaradaha dagaalka ee F-35.
Maraykanka ayaa sidoo kale Turkiga cadaadis ku saarayay in uu ka iibsado gantaallada uu sameeyo ee difaaca hawada sare.
Masuuliyiin sare oo Nato ka tirsan ayaa ku celceliyay in hubka Ruushku uusan la jaanqaadi karin qalabka ay xulafadu adeegsato.
Sidee Turkigu uga falceliyay?
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ku celiyay in ay la tahay in aan laga noqonayn heshiiska uu dalkiisu la galay Ruushka, kaas oo lagu qiyaasay in uu ku kacayo 2.5 bilyan oo doolar.
Madaxweyne ku xigeenka Turkiga ayaa mar dambana Twitterka ku soo qoray “waxaa waajib ah in Maraykanku uu kala doorasho sameeyo.
“Ma wuxuu doonayaa in uu xulafo la sii ahaado Turkiga mise wuxu doonayaa in uu ku buuro kooxaha argagixisada si uu u wiiqo xulafada Nato ee difaacaysa cadawgiisa.
WarbixinReport this social embed, make a complaint
Ankara ayaa sheegtay in gantaallada S-400 ay ka caawin doonaan in dalku uu is difaaco, maadaada uu Turkigu halis kala kulmayo jabhadaha Kurdiyiinta iyo malayshiyaadka Jihaaddoonka ah.
Muxuu yahay hannaanka difaaca hawada sare ee S-400?
Gantaallada S-400 ayaa ka mid ah hannaanka difaaca hawada sare ee ugu cajiibsan dunida marka laga hadlayo kuwa dhulka laga rido.
Wuxuu gaari karaa ilaa 400km, hannaanka S-400 ayaa sidoo kale isku mar u dhici kara 80 jiho.
Ruushkuna wuxuu sheegay in uu soo ridi karo diyaaradaha jooga hoose ku socda, diyaaradaha aan cidina wadin, diyaarado joogag kala duwan ku socda iyo gantaallada riddada dheer.
Siduu u shaqeeyaa Gantaalka S-400?
Raadaar joogga sare qaabilsan ayaa la socda dhaqdhaqaaqa diyaaradaha ama gantaallada wuxuuna ku tiirsan yahay macluumaadka uu ka helo gaariga taliska, kaas oo qiimeeya meelaha ay tahay in la bartilmaameedsado.
1. Bartilmaameedka marka la helo gaariga taliska ayaa amra in gantaalka la rido.
2. Xogta in gantaalka la rido ah ayaa loo diraa gaariga ugu haboon ee bartilmaameedsan kara, gantaalka ayaana sidaa dhulka looga ridaa.
3. Raadaarka ayaa gacan ka gaysta hagidda gantaallada si ay bartilmaameedka u haleelaan.
Previous: 207 qof oo ku dhimatay qaraxyo ka dhacay kaniisado iyo hoteello ku yaal Sri Lanka
Next: Garyaqaan Maxamed Xasan Siciid oo kamid ahaa dhalin yaro ku Somowday hamaha shidaalka ee barbara 1999kii waxa uu dacwoonayay mudo ku dhaw 30 sano isaga oon ka helin xaqiisa shirkadii total loona xukumay hadana xukumadu kadhaqaajisay xuquuqdii uu lahaa ayuu kageeriyooday
Aas Qaran Oo Hargeysa Loogu Sameeyay, Marxuum Taliye Cabdiraxmaan-Fooxle
Somaliland Iyo Xanuunka Coronavirus Mxaa Kala Haysta?
Maxaa Kala Haysta, koronkorta & Somaliland
Somaliland oo Halkii ugu Xumayd uu Marayo Xanuunka Covid 19
Siyaasi Si Adag U karbaashay Madaxweyne Biixi & Xukuummadiisa 2020
Somaliland: Magaalooyin Ku Gacan-saydhay Awamiirtii Gudiga Covid 19 + Sababta
"Waxanu kuu Sheegaynaa Madaxweyne, Rejadii way luntay Intaad Joogtay" Sheekh Adam-siira
Somaliland Oo Saq Dhexe Ku Dhawaaqday Ciidul Fidriga 2020
"Waxan leeyahay Si Deg Deg ah, ha loo Soo Gaadho Abaarso..."Gudoomiye Jibaax
" Xukuumaddu Xogogaal Ha U Ahaato Xaalada Adag " Siyaasi Baashe Cali Jamac
Somaliland oo Maamnuucday Kutukasahda Masajida iyo Garoonada Salaada Ciida
Maxaa kala haysta Ayaxa iyo Somaliland
Ku Xidhnow Sariflaha Cabdinaasir Money Exchange 2020
"Maamulkiibaa Xumaaday, Ina Adeerkay-baa Xaq-daro Igu Sameeyay waan Duminayaa" Faysal Caliwaraabe
Dood Cajiib ah Oo Lagaga Hadlay Somaliland Iyo Soomaliya
Maxaad Ka Ogtahay Qaabkii uu U Dhacay Xuskii 18 May 2020?
Madaxweyne Biixi Oo War Lama Filaan ah U Diray Xamar Iyo Madaxweyne Farmaajo
Maxaa Kala Haysta, Dadka Jooga Hargeysa Iyo Su'aalaha Diiniga ah 2020
"Midnimadda Annagaa Ugu Horeynay, Annagaana Ugu Horeyn Doona.." Boobe Yuusuf
Gudoomiye Cirro oo Bulshada Ku Hambalyeeyay Xuska 18 May, Dibna u Saxay Gabay uu Qalday Cida Tirisay
"Awliyadu Ma Dhintaane way dhuuntaan, Markaa Mujaahid Xasan..." Siyaasi Cali-gurey